रानी बेड फ्रेम असबाबदार हेडबोर्ड
फर्निचरको यति ठूलो संख्या र देखिने टुक्राको सामना गर्दै, धेरै विचारहरु लिनु पर्छ. पक्कै पनि, ओछ्यान फ्रेमका लागि, प्रकार आकार को रूपमा सामग्री को लागी को रूप मा धेरै हो. यसैले, यदि तपाईं अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ वा तपाईंलाई गाह्रो छ कि कुन निर्णय गर्ने भनेर पहिलो निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यो रानी ओछ्यान फ्रेम असबाबित हेडबोर्ड सिक्ने बारेमा?
सामन्यतया, के हामी समय को बारे मा सोच्न को लागी कसरी सही र राम्रो गद्दा पाउन को लागी हो. तथापि, जो कोहि एक बेड फ्रेम किनेको छ यसको महत्व संग सहमत छ कि अक्सर मात्र धेरै प्रयास लिन्छ. फर्निचरको यति ठूलो संख्या र देखिने टुक्राको सामना गर्दै, धेरै विचारहरु लिनु पर्छ. पक्कै पनि, ओछ्यान फ्रेमका लागि, प्रकार आकार को रूपमा सामग्री को लागी को रूप मा धेरै हो. यसैले, यदि तपाईं अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ वा तपाईंलाई गाह्रो छ कि कुन निर्णय गर्ने भनेर पहिलो निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यो रानी ओछ्यान फ्रेम असबाबित हेडबोर्ड सिक्ने बारेमा?
रानी ओछ्यान फ्रेम असबाबदार headboard सही बयान टुक्रा विभिन्न शैलीहरु संग कुनै पनि शयनकक्ष मा राख्न को लागी हो. खैरो भव्य असबाबदार समाप्त र चिकना डिजाइन यो अधिक सुन्दर र सुरक्षात्मक बनाउन. अपहोल्स्टर्ड साइड रेल एक सुरुचिपूर्ण र सुन्दर लुक सिर्जना गर्दछ जुन एक क्लासिक स्क्वायर टफटेड असबाबदार हेडबोर्डको साथ पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ।. पow्क्ति कंकाल पूर्ण रूपमा तपाइँको गद्दा समर्थन गर्दछ. चारैतिर काठको बोर्डहरु आधार मा गद्दा ठीक गर्न सक्नुहुन्छ. टिकाऊ र उत्तम दर्जेको ओछ्यान खुट्टा एक बहुमुखी रूप को लागी डिजाइन गर्दछ कि धेरै शैलीहरु र प्राथमिकताहरु संग राम्रो संग जान्छ. सबै चीज तपाइँ छिटो र सजीलै संग यो बेड फ्रेम स्थापित गर्न को लागी एक डिब्बा मा शामिल छ. जहाज छिटो र सुरक्षित एक बक्स मा लपेटिएको, तपाइँको गोदाम को लागी सही.
प्रकार: घर फर्निचर, शयन कक्ष
सामग्री: कपडा; धातु;
उपस्थिति: समकालीन फर्नीचर
उत्पाद नाम: क्वीन बेड फ्रेम अपहोल्स्टर्ड हेडबोर्ड
मोडेल नम्बर: BF-AU01-04
समारोह: भोजन बेड आधार
प्याकिंग आकार(सेमी): 139एल*192W